Ọrụ nke mma nke ụwa na ndụ nke nwaanyị
Na ndụ nke nwanyị ọ bụla, e nwere oge mgbe ihe niile yiri ka ọ bụ isi awọ ma na-agwụ ike n'ihi ihe ụfọdụ. Ọrụ ahụ na-agwụ ike, mmetụta ndị ahụ na-agwụ ike, ị malite inwe obi abụọ ma ọ dị ya.
Mmetụta ịda mbà n'obi na-ekpuchi isi na ọ ga-achọsi ike ịla n'iyi n'ụwa niile. Nsogbu bụ na ọ dịghị ebe. Ya mere, na-arụ ọrụ ọ bụla na-arịda ala, na esemokwu n'ụlọ mgbe niile. Otu nwoke nke dị n'akụkụ isi ya gbawara na ịchọta azịza ya, ihe ị chọrọ. Mana gburugburu ụdị obi ụtọ na okike ndị dị otú ahụ na ị na-eche ... ọ dịghị onye.
Nsogbu nke oke ọkara nke mmadụ bụ kpọmkwem na ọ mara mma, ya mere, ọ dị mkpa ka a kwụghachi ya dị ka ọmarịcha dị ka ọ dị. Nsogbu nke ịma mma na-abịa n'oge na-adịghị anya ná ndụ nke nwanyị ma ọ bụ nwanyị ọ bụla. Eziokwu bụ na ọ bụ ezie na anyị alụghị di ma ọ bụ nwunye, anyị na ndị enyi anyị na-aga maka ihe ngosi, ihe ngosi nka na veranda, wdg. Ma ọ bụrụ na nwanyị lụọ, ndepụta ngwa ngwa nke ikpe na-ebili ngwa ngwa, bụ nke a na-adịghị ahụ anya. Ee, na n'etiti mmadụ, ị na-ahụkarị ndị mara mma. Ha ga-aka mma iji ego gaa ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma ọ bụ na ha ga-azụta ụgbọala ọhụrụ maka ụgbọ ala, "ọ dịkwa mma," ha na-akọwa. Ma, na nke a, ndị mmadụ na-ezighị ezi, ọ bụrụ na ha kwụsịrị ịzụ fatịlaịza ha, nwunye, mmiri na fatịlaịza, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-abụ wilts.
Ọ bụrụ na nwoke gị abụghị ụdị nke ndị nnọchianya nke mmekọahụ siri ike nke na-adịghị ajụ ịga na gallery ma ọ bụ ihe ngosi nke foto, mgbe ahụ, ị ​​ga-echekwu banyere ọrụ ọma nke ụwa gbara gburugburu na ndụ nke nwanyị ọ bụla. Ya mere, mee atụmatụ, nke na-aga eleta na n'ozuzu ihe ị ga - eme iji jikọta ya na ịma mma.
1. Ọ dị mkpa ileta ụlọ ngosi nka, ihe ngosi na ihe ngosi. Ọ gaghị adabere na ma ọ bụ ejiji, nke oge a ma ọ bụ na-ewu ewu, ị ghaghị ilekwasị anya na mkpa anụ ahụ, ọ bụghị n'olu nkịtị. Ị nwere ike ịga na ụlọ ngosi ihe nka nke mpaghara mpaghara, na-enweghị agba ọsọ na gburugburu ya, nyochaa ihe ndị kachasị amasị, ma na-achọ ụlọ maka ozi ndị ọzọ. Ịchọ ịmata ihe ga-eme ka ị cheta na ị ga-abụ ike ịkwalite onwe gị.
2. Ọ dịkwa oke mkpa ịgụ oge ochie. Isi ihe bụ imeri stereotypes, nke na-agwụ ike na enweghị mmasị. A sị ka e kwuwe, a kụziiri anyị n'ụlọ akwụkwọ, n'ihi na a manyere anyị ịgụ, na ihe niile a na-amanye ime ka a gụọ dị ka enweghị mmasị. Na n'ozuzu, echiche ahụ bụ ihe ọjọọ na njirimara bụ maka ihe dị elu na ihe efu ndị ọzọ. Akwụkwọ ndị a bụ banyere mmetụta, mmekọrịta nke ndị mmadụ, banyere ahụmahụ na nkọwa dị iche iche n'oge dị iche iche.
3. Ọ dịghị mkpa iche na ihe niile mara mma na-ezo na veranda na ihe ngosi nka, yana ihe ndetu nke ịma mma nwere ike na-enyocha n'ugwu obodo.
Ogologo oge gara aga, onye na-ese ihe, ịhụ otu agadi nwanyị nke na-agbapụta na ahịhịa nwere ike, na-adọrọ mmasị. N'ihi na mgbe ọ tụgharịrị n'ebe ọ nọ - na aka ya bụ ihe edeturu, ochie na mkparị, nke onye tụpụrụ. Ọnọdụ a mere ka ihe mgbagwoju anya dị egwu, n'ihi na ihe nchịkwa banyere ndị a dịlarị amalite, ma omume ndị a na-atụghị anya ha na-eduhie. Mee ka ị chegharịa ndụ gị dum. Ya mere, ị gaghi eche echiche n'echiche na ịchọ mma naanị na ebe a kapịrị ọnụ.
4. Na-eje ije na obodo obodo, mee ndokwa ụdị mgbama, ya bụ, cheta ebe na ebe ị hụrụ mara mma. O nwere ike ịbụ ihe ncheta, ma eleghị anya ọ bụ square nkịtị, ọ dabara na ike nke echiche gị. A gbakwunyere na ịkwanyere gị ùgwù na ị maara ọtụtụ ụkpụrụ ụlọ akwụkwọ akụkọ ndị dị na obodo gị. Ma ọ bụrụ na ị maghị, gaa na njem nke obodo obodo. N'ezie, ọ na-ada ụda, ma ọ ga-eju gị anya na ọnụ ọgụgụ nke akụkọ, ihe omimi ndị na-ezochi mgbidi obodo ahụ. Karịsịa, ị nwere ike igosi ihe ọmụma gị ma ọ bụrụ na ndị ọbịa si n'obodo ọzọ abịa gị, na-eju ha anya na ha nwere ihe ọmụma ha.
5. Ịlaghachi n'ụlọ, ịkwesighi ịhọrọ ụzọ, na ụzọ ị maara onye ọ bụla na-agafe agafe na obere agbaala ọ bụla n'okporo ụzọ, họrọ ihe ọhụrụ na mgbagwoju anya.
6. Mgbe ị na-aga n'ụlọ, elela anya na mbara ala mara mma na ụkpụrụ ụlọ, ndị enyi na ndị mmadụ. Were maka iwu ka ị ghara ịkpọ ndị mmadụ asị, ọ bụghị ile anya maka ezughị okè, n'ihi na enweghi ezigbo ihe ọ bụla ma ha niile nwere adịghị ike. Na onye ọ bụla, e nwere ihe pụrụ iche, magburu onwe ya. Gbalịa ịchọta nke a ma nwee mmasị na mma nke anya nke onye o doro anya na ọ bụghị ezigbo mmadụ.
7. Echefula, ihe mara mma, nke a bụ ihe okike kere. Lezienụ anya na mgbanwe dị na mbara igwe tupu mmiri ozuzo ... Cheta oge ị bụ nwatakịrị nwere ike ịbanye site na ikpo ọkụ ọkụ na-enwe obi ụtọ dị ukwuu. Icheta ọnọdụ a dị jụụ, n'oge na-adịghị anya ị ga-amụta otú ị ga-esi weghachite ya, weghachite ya site na nwata.
Ma ọ bụrụ na isi ihe a abụghị ihe e dere n'ike mmụọ nsọ ma ọ bụ mee ka ha kwenye na ikpo ọkụ nke ụwa gbara ya gburugburu, ha ga-ekwenye ihe ndetu nke enweghị atụ n'okpuru.
Okpukpe nke ịma mma na erughị ya
N'ụzọ dị mwute, ọrụ nke ịma mma nke ụwa gbara gburugburu na ndụ nwanyị nwere ihe dị iche iche dị iche iche karịa taa. Dika nmuta nke uzo di iche iche, ihe ndi mara nma nke ochichi mara nma. Nleta ọhụụ kwa ụbọchị na ihe ejiji mma na-eme ka ụmụ nwanyị taa. Ụmụ nwanyị ndị mara mma, ndị mara mma, gbara anyị gburugburu, mana n'otu oge ahụ, ha, na ndị ọzọ nọ n'ụwa, na-enwe mmetụta nke enweghị mmetụta uche, ọdịda nke ịma mma ime mmụọ. E kwuwerị, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ n'ihu nwanyị, gaa na gallery ma ọ bụ gaa ahịa, ọ ga-ala azụ ịhọrọ nke ikpeazụ.
N'ezie, nhọrọ nke abụọ, nke na-atụ aro na ụmụ nwanyị adịghị etinye oge iji maa mma, n'ihi na ha enweghị oge na ego iji gafee na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ihe ngosi. Ma, ọ dị mwute, ọbụnadị eziokwu a emeghị ka onye ọ bụla kweta, n'ihi na ọ dịghị onye na-egbochi ịgụ akwụkwọ edemede oge ochie ma ọ bụ na-eje ije na mgbede. Cheta ma ọ dịkarịa ala, bụ uri bụ onye, ​​mgbe ha bi n'obodo nta, chọtara oge maka creativity, ha agụghị ya, ha kere ya, nke mere na taa mara mma gbara anyị gburugburu.
Otú ọ dị, n'oge nkà mmụta dị ugbu a, echiche nke ịma mma na-agbaji, ọ bụ ezie na anyị ekwesịghị ịhapụ eziokwu ahụ na taa ọ bụghị ya. Mepụta! Anyị anaghị anakwere ya n'ọtụtụ ọnọdụ n'ihi nkwenkwe echiche, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ndị na-ese ihe n'oge a na-ese ma na-ede ede uri, echela ya. Ọ pụtara na ị nwere ọnọdụ ndụ gị.
Otu esi egbochi ihere na nnukwu ụlọ ọrụ
Mmepe nke femininity na agwa nwanyi
Ọchịchị na afọ ndụ mmadụ
Ezigbo ego ezinụlọ - onye na-enye iwu egwu?
Ụmụ nwanyị enweela ụdị nwoke
Ihe mgbaba na-ata ahụhụ ọtụtụ ndị inyom
Hụ egwu na anya gị
Ọ bụrụ na mmadụ aṅụ ntakịrị, ihe kpatara ya
Buns na cinnamon na-acha ọkụ
Okroshka na kefir na mmiri ịnweta mmiri
Kedu ihe dị ize ndụ maka enweghị vitamin na nri oriri na-edozi ahụ
Ntụziaka maka "tọrọ ụtọ muffins"
Otu esi eme ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ
Nri nke Prọfesọ Usama Hamdiy
Olee otú ị ga-esi merie onye mba ọzọ
Iwu nke nlekọta maka ntutu, akpụkpọ ahụ, mbọ
Kedu ka esi mee onwe gị ka ị dị ọcha mgbe i tụsịrị ime?
Olee otu esi enweta nduhie ma chekwaa ezinụlọ?
Afọ mbụ nke ndụ nwa ọhụrụ
Olga Buzova gbanwere ndụ Semyon Slepakov
Njirimara nke mmekorita nke ihe ndi di ndu
Ofe na Brussels pulite